I-Pedalampenet - Ibhulogi yobuKristu ejwayelekile. Thola konke ngawo wonke umuntu
Imoto / isithuthuthu / iveli
Izipho Mashi 8
Izipho ezenziwe zaba ngezakho
Izindawo zokuhlala zangasese ze-felix
Kuhlala ekhatsi Brasov
Indawo yokuhlala Cluj
Indawo yokuhlala Constanta
Indawo yokuhlala ngasolwandle
Indawo yokuhlala ezintabeni
Amakhamera wesithombe / wevidiyo
Amawashi / amasongo
Zonke izikhala zomsebenzi ezibandakanya wonke umuntu
Ukunikezwa ngomzuzu wokugcina
Ubuciko / isiko
Uhlu lwezinto zokuzilibazisa ezingena imali ezingama-30 + 2021
Posted by admin ngo-feb. 4, 2021
Nalu uhlu lwezinto zokuzilibazisa ezingenziwa imali futhi zihlolwe ngo-2021. Uma ungenayo into oyithandayo, yisikhathi sokukhetha kulolu hlu olungu-100 + lwezinkanuko ongazenza imali ngo-2021 noma kamuva. Eminye yalezi zinto zokuzilibazisa ihlolwe yimina futhi isebenza i-100%. Kuyadingeka ukunikela okungenani ihora eli-1 ngosuku kubo ukuze bakwazi ukwenza imali kubo okungenani iminyaka emithathu.
Ngifuna ibhizinisi elingisebenzelayo
Posted by admin ku-ian. 6, 2021
"Ngikhombise ukuthi useshela ku-google ukukutshela uma uphumelela" UCristi Onetiu Engxoxweni phakathi kukaGeorge Buhnici noCristi Onetiu, e-IGDLCC uCristi uthe udinga umlando wokusesha kwakho ku-google futhi lokhu kuyisibonakaliso uma uphumelela okufunayo. Uyabona ukuthi uma ufuna ibhizinisi elikusebenzelayo futhi uma ufuna okuthile okuhluke ngokuphelele kuGoogle ngokusobala ngeke uphumelele. Kuyimpendulo esitatimendeni esithi "siyikho esikucabangayo", esikucabangayo amagama esiwafunayo ku-google noma kwi-intanethi, siyizixhumanisi esizilandelayo, siyizincwadi esizifundayo. UCovid usishintshe kakhulu. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi, ukuzihlukanisa emakhaya abo ... Kumele nje sivumelane nezidingo ezintsha. Kufanele sicele okuthile okuhluke ngokuphelele endaweni yonke. Sinekhono lokubheka esikhathini esizayo, sibheke futhi sithathe izici zesikhathi esedlule. Sidinga ukubona ukuthi yini efanelekile futhi ebalulekile ngekusasa. Kubukeka sengathi impilo ishaya ifilimu ne-sci-fi seyenzekile ngokwezinga elithile. Ukubheka esikhathini esizayo ngo-2020 akufanele kusesabise. Umsebenzi Akudingeki ukuthi singene ngokuzumayo ohlelweni lwamahora ayisishiyagalombili ngakho-ke siyathatha umhlalaphansi. Kufanele sizibone silusizo zonke izimpilo zethu futhi siphuphe imigomo kusukela ebuncaneni (bheka u-celine dion owaphupha eneminyaka engu-8 ukuba adume futhi kumdlalo we-TV uphendula ukuthi akamangazanga ngempumelelo yakhe ngoba e ...
Ngabe udinga izifundo zokuzithuthukisa?
Posted by UPaul Gavris ku-ian. 5, 2021
Sanibonani bangani! Bengilokhu ngicabanga engqondweni yami kulezi zinsuku: "Ngabe siyazidinga ngempela izifundo zokuzithuthukisa?", Futhi uma kunjalo, "Sazi kanjani ukuthi hlobo luni lwezifundo olulungele thina?" Olomuntu siqu nokuthi lusebenza kanjani kuwe? izindlela zokuthuthuka futhi ungazisebenzisa kanjani? INCWADI ENGCONO YOKUTHUTHUKISWA KOMUNTUSizikhuthaza kanjani ezikhathini ezinzima kakhulu? Kungani intuthuko ...
Thembela umqondo webhizinisi
Posted by admin ku-ian. 5, 2021
Imvelo isinikeza imibono eminingi ephumelelayo yebhizinisi. Njengenyoni engawi emlenzeni ngoba ithemba izimpiko zayo hhayi umlenze wayo, usomabhizinisi kumele awuthembe umqondo wakhe webhizinisi. Uma ungabaza umbono wakho webhizinisi uma uthi uzolahla uhlelo uma lungaphumeleli ngosuku x, uzikhohlisa nje ngokuthi uzophumelela. Kuzuzwa impumelelo ...
Okusanda Kuthunyelwa Kusuka Ku Zonke imidlalo
apr. 8Posted by U-Alina Ileana in Indlu nengadi
Isikole se-Sureanu ski sizokufundisa ukushushuluza ngokuphelele
apr. 8Posted by U-Alina Ileana in Ezempilo, Ezemidlalo
apr. 8Posted by U-Alina Ileana in Ezempilo
apr. 8Posted by U-Alina Ileana in Imoto / isithuthuthu / iveli
Ungakuqinisekisa kanjani ukuvikeleka kwakho emsebenzini ngemishini efanele
apr. 1Posted by U-Alina Ileana in Imisebenzi
Ukuvikelwa emsebenzini kuqinisekiswa yizimo zokusebenza ezifanele ...
Thola ama-foil wokufaka owadingayo
Ukupakisha okufanele kufanele kugcine umkhiqizo wakho ungaphelele ...
Ama-capsules ekhofi avame ukufunwa
uMart. 31Posted by U-Alina Ileana in Ukudla
Usuku oluhle luqala ngekhofi enhle. Ikhofi linikeza amandla athe xaxa osukwini ...
Ukudla kwenja kumele kuqukathe amaprotheni amaningi
Inja ingumngani omkhulu womuntu. Babodwa abakwaziyo ...
Ku-BeKid.ro ngizohlala ngizijabulela izihlalo zemoto ezifanele ingane yami
uMart. 31Posted by U-Alina Ileana in Fashion
Izihlalo zezimoto zilungele kakhulu uma ufuna ukuhamba ne ...
Umthwebuli zithombe zomshado uCluj
Konke kumayelana namabhayisikili
Isayithi ibanjwe ngu:
Yiba umbhali esizeni
admin la Ingabe unayo into yokuzilibazisa? yenze imali, ngikufundisa mahhala
Simona la Ingabe unayo into yokuzilibazisa? yenze imali, ngikufundisa mahhala
Ionut la Ama-capsules ekhofi avame ukufunwa
Vivien la Ungakuqinisekisa kanjani ukuvikeleka kwakho emsebenzini ngemishini efanele
اسکیت la Ungakuqinisekisa kanjani ukuvikeleka kwakho emsebenzini ngemishini efanele
Lawrence la Ungakuqinisekisa kanjani ukuvikeleka kwakho emsebenzini ngemishini efanele
خرید بک لینک la Ungakuqinisekisa kanjani ukuvikeleka kwakho emsebenzini ngemishini efanele
I-Bogdan la Nikeza izikhangiso ze-SEO zamahhala
Ikhalenda le-Orthodox 2021
Ukuqashwa kokudla kwe-Bolt
Ukuphatha: UCristian S
contact U-Linkedin Cristian
Ikheli: ICluj-Napoca 400423 RO